Maxaa uga baahan tahay inaad ka ogaatid filimka weyn RRR – Filimside.net
Maxaa uga baahan tahay inaad ka ogaatid filimka weyn RRR
Waxaan maanta idinla wadaagnay in Ram Charan, Jr. NTR iyo Director SS Rajamouli filimkooda RRR magac ahaan loogu yeero si ku meel ah lagu soo daray Ajay Devgn iyo Alia Bhatt sidoo kalena filimkan weyn la daawan doono 30 July 2020 intaas waxaa dheer in caawo la leeyahay mashruucaan 400 Crore ($56.34m) sidoo kalena shaqadiisa mudo sanad ah qaadan doonto.
Haddaba waxaan soo kordhay in la ogaaday in filimkan Alia Bhatt ku jileyso doorka Sita sidoo kalena Ram Charan jaceyl la wadaageyso waxayna xidigtan tiri “La shaqeynta Director Rajamouli waa guul weyn aan gaaray sidoo kalena sharaf weyn ayay ii tahay inaan shaashada la wadaagayo Ram Charan iyo Jr. NTR. Markii ugu horeesay ayay Koonfurta la shaqeenayaa. Waxaana filimkan ku jilayaa doorka Sita ee Ram jaceyl la wadaageyso.”
Ram Charan wuxuu ku matalayaa filimkan dagaal yahankii xurnimada Hindiya usoo dagaalamay 1920-aadkii Alluri Sitaramaraju wuxuun ahaa nin diidan inuu gumeysigii Ingiriiska canshuurta beeraha siiyo sidoo kalena dagaal la galay oo duurka ku noolaan jiray hanti badana Ingiriiska ka dhacay ugu dambeyntii wuxuu geeriyoonaa ama la dilaa asigoo gumeysiga Ingiriiska dagaal kula jiro!
Jr. NTR wuxuu ku mataa doorka dagaal yahankii xurnimada Hindiya usoo dagaalamay 1920-aadkii Komaram Bheem wuxuuna ahaa hogaamiye qabiileed wuxuuna la dagaali jiray gumeysigii Ingiriiska gobolka Nizam ka talin jiray, markii aabihiis dilaan Ingiriiska ayuu sii gadoodayaa asigoo keenta galaayo noloshiisa oo dhanna ku bixinaayo sidii uu Ingiriiska marwalbo naftooda iyo maalkooda u beegsan lahaa.
F.G: Ajay Devgn doorkiisa muhiimka ah filimkan ku yeelanayo wax sharaxaad ah lagama bixinin waana door la qarinaayo oo saameyntiisa wato.